Sory Hadalkeeda Sidu Nogu Yimd Waa Hagoogneyn .. iLhaan Cumar Oo Ka Guuleystay Beenti Iyo Maagi Lagu Soo Eedeyey
Thursday - March 7, 2019
Xildhibaanada Taageersan Xukuumada Benjamin Netanyahu ee ka tirsan Xisbiga Dimuquraadiga Maraykanka oo ay Ilhan kamid tahay ayaa waday olole ay doonayeen in Golaha Wakiilada cod u qaado qaraar lagu cambaareenayo Xildhibaanada asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen Yahuud-naceyb.
Weerarkan cusub oo bilowday horaantii asbuucan ayaa waxaa soo abaabulay qaar kamid ah hogaanka Xisbiga Dimuquraadiga oo ay ku jirto Guddoomiyahooda Ms.Nancy Pelosi iyo koox Xildhibaano Yahuud ah oo ku tilmaamay hadalada Xildhibaanada Ilhan kuwo salka ku haya yahuud-naceyb, kooxdan xildhibaanada ah ee cadaadiska saaray Ilhan markii 2aad ayaa ah kuwa daacada u ah kooxda u ololeysa Israel ee loo yaqaan AIPAC oo ay horey u cambaareysay Ilhan Omar.
Qaraarka ay soo diyaariyeen Xildhibaanadan oo ay doonayeen in codka loo qaado Arbacadii shalay ayaa fashilay kadib markii uu buuq weyn ka dhex dhashay isla xisbiga Dimuquraadiga oo ay xildhibaano badan la safteen Ilhan iyadoo shirkii xisbigaasii keenay in lagu kala kaco.
Ilhan Omar oo diiday in siyaasiyan-la-aamusiyo ayaa Sabtidii lasoo dhaafay shir ay ka qeyb gashay ku sheegtay in ay khalad tahay in Xildhibaanada Maraykanka ay daacad u ahaadaan labo wadan hadii ay doonayaan inay kamid ahaadaan guddiyada Baarlamaanka ee awoodaleh, hadalkaasi oo loo micneeyey inay ulla jeeday wadanka labaad Israel oo ay daacad u yihiin Xildhibaano badan oo Maraykan ah.
Xildhibaanada u badan dhalinyarada ee ku cusub Baarlamaanka oo iyagu hada taageero xoogan ku dhexleh shacabka Maraykanka ayaa la saftay Ilhan Omar, arrintaasi oo keentay in dib loo dhigo qaraarkii taageerayaasha Israel horkeeni lahaayeen Baarlamaanka.